16 gabdhood oo wada shaqeeya oo isku mar wada uuraystay - BBC News Somali
16 gabdhood oo wada shaqeeya oo isku mar wada uuraystay
19 Agoosto 2018
Lahaanshaha sawirka BANNER HEALTH
Image caption Qaar ka mid ah kalkaaliyeyaasha uurka qaaday
In uur la yeesho mararka qaar waxay noqon kartaa wax iska sahlan marka la eego isbitaal ku yaalla magaalada Mesa ee Gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, halkaasoo ay mar qur ah wada uuraysteen 16 kalkaaliyeyaal oo uur leh.
Tiradaas ayaa ah 10% ka mid ah guud ahaan kalkaaliyeyaal ka howlgala qeybta lagula tacaalo bukaanada u baahan adeegyada gurmadka degdega ah ee caafimaadka.
Bukaannada ayaa billaabay in ay gartaan arrintaas, sida ay sheegeen qaar ka mid ah kalkaalisooyinka.
Mar ay shir jaraa'id oo arrintaan ku saabsan qabanayeen ayay haweenka kalkaaliyeyaasha ah ku kaftameen in malaha biyaha ay wax ku jiraan, ama uu jiray qorshe la isla ogyahay oo loogu sii diyaar garoobayay fasax wada jir ah oo loo aado ciidda masiixiyiinta.
Haweeneyda ugu horreysa ee dumarkaas xaamilada ah ayaa la filayaa in ay umusho bisha September halka tan ugu dambeysana la filayo in ay cunugeeda dhasho bisha January.
Rochelle Sherman oo ay hal bil oo kaliya uga harsan tahay in ay umusho ayaa tiri: "Uma maleynayo inaan is ogeyn inaan dhammaanteen uur wada leenahay ilaa inta aan ka sameysannay qol facebook ah.
Jolene Garrow ayaa iyadana uga mahad celisay shaqaalaha kale sida ay ugu caawiyaan howlaha aysan haweeney xaamilo ah sameyn karin - sida la tacaalidda cudurrada la is qaadsiiyo oo ay ka mid yihiin qaaxada iyo cudurrada ku dhaca maqaarka, ama in daawooyinka qaar la siiyo bukaannada qaba cudurka Kansarka.
Shaqaalaha ayaa toddobaadka soo socda si wada jir ah xaflad farxadeed ugu qaban doona dhammaan haweenka kalkaalisooyinka ah ee uurka leh, ka hor inta aysan u bixin fasaxooda dhalmada ee 12-ka toddobaad ah.